ကြွေး ယူ ပြုံး ပြုံး…မ မုန်း ရ အောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကြွေး ယူ ပြုံး ပြုံး…မ မုန်း ရ အောင်
ကြွေး ယူ ပြုံး ပြုံး…မ မုန်း ရ အောင်
ယ ခင် ကျ မ တို့မိ ဘ လက် ထက် ဈေး ရောင်း စဉ် အ ခါ က ၊ ဖောက် သည် လက် လီ လက် ကား အ ကြွေး ပေး ရ ၏ ။
အ ချို့ က သ စ္စာ ရှိ ပြီး ၊ အ ဟောင်း ကို ဆပ် ပြီး မှ သာ အ သစ် ထပ် ယူ ၏ ။ တ ချို ့က အ ဟောင်း ကို တ ဝက် ဆပ် ခါ ၊ အ သစ် လည်း ထပ် ယူ ချင် သ ဖြင့် တောင်း ဆို သော အ ခါ ၊ မိတ် ဟောင်း မိတ် သစ် ၊ ဖောက် သည် မ ပျက် ချင် သော ကြောင့် နောက် ထပ် အ ကြွေး ထပ် မံ ပေး လိုက် ရ ပြန် သည် ။
ကာ လ အ တန် ငယ် ကြာ လာ သော အ ခါ တွင် ၊ စာ ရင်း တွေ ထပ် ခါ ထပ် ခါ ရေး ရ သ ဖြင့် ဇတ် လမ်း က ရှုတ် လာ ပါ တော့ သည် ။ ထို အ ခါ အ ကြွေး အ ပြည့် အ ဝ ပြန် မ ဆပ် ချင် သည့် စိတ် ကြောင့် ၊ အ ခြား ရောင်း သူ တစ် ဦး ထံ သို့ပြောင်း ဝယ် တော့ တာ မျိုး ကြုံ ကြ ရ ပါ သည် ။ စာ ရင်း ချုပ် လျှင် အ ကြွေး မ ပေး သူ ၏ လက် ကျန် စာ ရင်း က ပေါ် နေ ၏ ။
အ ဟောင်း ပေး အ သစ် လည်း ထပ် မံ မ ယူ တော့ သော သူ ၏ လိပ် စာ ပါ အ တိုင်း အိမ် တိုင် ယာ ရောက် လိုက် လံ တောင်း ယူ ရ ခြင်း ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။
ထို အ ခါ မျိုး တွင် အ ဖေ မှာ နေ ကြ ၊ ပြော ဆို ဆုံး မ နေ ကြ စ ကား များ ရှိ ပါ သည် ။ ထို သူ က မ ပေး ချင် သည့် စိတ် ကြောင့် ၊ တောင်း သော အ ခါ ရန် အ တွေ့ခံ ရ နိုင် သည် ။ အ ကျိုး ကြောင်း ခိုင် လုံ ပြေ ပြစ် စွာ ပြော ဆို ပြ ပြီး မှ သာ တောင်း ဆို ရန် မှာ ပါ သည် ။
အ ဖေ က….
ချစ် သူ မုန်း ဆေး အ ကြွေး ပေး ၊ ဆို သ လို ချစ် ခင် မှု ကြောင့် အား နာ ပြီး ၊ မျက် နှာ ရင်း နေ သ ဖြင့် အ ကြွေး ပေး လိုက် မိ ပါ က ၊ သူ က ပြန် မ ပေး ချင် တော့ လျှင် ၊ တ ဦး ကို တ ဦး မုန်း ရ သည့် အ ဖြစ် မျိုး သို့ရောက် ရှိ ကြ ရ သည် ။
ဒါ ကြောင့် သာ ရှေး လူ ကြီး များ စ ကား ဆို ရိုး ထား ရှိ လာ ခဲ့ ကြ ခြင်း ကား ….၊ ချစ် သူ မုံး ဆေး အ ကြွေး ပေး ဟု ဆို ကြ ရ သည့် အ ပြင် ၊ နောက် ဆက် တွဲ စ ကား ချပ် အ နေ ဖြင့် ထပ် မံ ဖြည့် တင်း ပြီး မွဲ ဆေး ဖော် သူ နာ လံ မ ထူ ဟူ ၍ ပြော ဆို ကြ ခြင်း ဖြစ် သည် ဟု အ ဖေ မှ ပြော ပြ ခဲ့ ပါ သည် ။
ဆုံး မ စ ကား လေး လည်း ဖြစ် ၍ ၊ မှတ် သား နာ ယူ သင့် ကြောင်း အား……ဆုံး မ ပြော ဆို သွန် သင် ပေး ထား ဘူး ပါ သည် ။
သို ့ရာ တွင် ဈေး ရောင်း ဝယ် ရာ တွင် ကား………မ တူ ပါ ။ အ ကြွေး နှင့် ကင်း လို ၍ ကား မ ရ ဟု အ ဖေ မှ ထပ် မံ ရှင်း ပြ ပြန် ပါ သည် ။
အ ရောင်း အ ဝယ် လုပ် ငန်း ကြီး များ လုပ် ကိုင် လာ ပါ က လည်း ၊ ဈေး ရောင်း ဝယ် မှု စံ နစ် အ ရ ၊ကြွေး မြီ ကြွေး ရှင် ကိ စ္စ များ က အ မြဲ တန်း ရှိ နေ နိုင် သည် ။ ဒါ က လည်း အ ရောင်း အ ဝယ် သ ဘော တ ရား များ ဖြစ် ကြောင်း ၊ ခွဲ ခြား ကွဲ ပြား နား လည် ထား ရှိ ဘို ့သ ဘော ပေါက် ရန် လို အပ် ကြောင်း ။
ထို သို့အ ရောင်း အ ဝယ် ပြု လုပ် ကြ ရာ တွင် လည်း သ စ္စာ ရှိ ရန် လို အပ် လှ ကြောင်း ။ တစ် ခါ ဆက် ဆံ ဆယ် ခါ လံ ၊ အ ဖြစ် မျိူး မ ရောက် အောင် ၊ တည် ကြည် သော စိတ် ၊ သစ္စာ ထား ရှိ သော စိတ် က အ ဓိ က ကြ လျှက် ရှိ နေ သည့် အ ပြင် ၊ မိတ် ပျက် အောင် ဆက် ဆံ မှု မျိုး ကား ရေ ရှည် တွင် မ တည် တံ့ ။ မ ခိုင် မြဲ ပါ ။ မ ယုံ ကြည် ရ ပါ က ၊ နောင် တွင် လုပ် ကိုင် စား သောက် ရာ ၌ လည်း ခက် ခဲ သည့် အ ခြေ အ နေ အား ရင် ဆိုင် တွေ ့ကြုံ နိုင် ရ မည့် အ ပြင် ၊ ဂုဏ် သိက္ခာ လည်း ကျ ဆင်း ရ မည် သာ ဖြစ် သည် ဟု အ ဖေ က ပြော ပြ ပါ သည် ။
အ ကြွေး သွား တောင်း ရာ တွင် လည်း ၊ ချို ချို သာ သာ ဖြင့် အ ကျိုး ကြောင်း ပြ ပြော ဆို ပြီး တောင်း ရန် ၊ စ ကား ကြီး ဆယ် ခွန်း ထဲ မှ ကိုယ် ပြော လို သည့် စ ကား အား ၊ ကောက် ပင် ရိတ် လှီး ကဲ့ သို့ပိုင် ပိုင် နိုင် နိုင် ပြော ဆို ပြ နိုင် ခဲ့ ရန် ၊ သွန် သင် ပြော ဆို ဆုံး မ ပြီး ၊ ကျ မ အား အ ကြွေး တောင်း ခိုင်း ခဲ့ ပါ သည် ။
အ ဖေ မှာ သည့် စ ကား အ ပြင် ၊ ကျ မ အ နေ ဖြင့် ဗ ဟု သု တ အ ဖြစ် မှတ် သား ထား မှု များ အား လည်း ထုတ် သုံး နိုင် ရန် ကြံ စည် စိတ် ကူး ရ မိ ပါ သည် ။ အ ကြွေး သွား တောင်း ရ မည့် သူ မှာ ဒေါ် သိန်း အေး ၊ အ သက် က လေး ဆယ့် ငါး နှစ် ခန့်ရှိ သည် ဟု သိ ရ ပါ သည် ။
သူ့ရောက် ရှိ နေ သည့် အ သက် မွေး နံ ၊ မ ဟာ ဘုတ် ကို မှန်း ဆ ၍ ကြည့် ရာ ၊ ငွေ နံ မှာ အ ထွန်း တွင် ရှိ နေ ပါ သည် ။ ထို နေ ့က အ င်္ဂ ဝိ ဇ္ဇာ အ ခါ တိုင် အ လို အ ရ ၊ ခင် ကြီး ဖျော် စီ ရင် ရေး သား တော် မူ ခဲ့ သည့် ၊ မု ဆိုး ရွှေ အိုး ရ ကိန်း ဖြစ် သော အ ခါ ၊ အ ချိန် နှင့် တိုက် ဆိုင် ၍ ၊ ၎င်း အ ချိန် အ ခါ တွင် ၊ သူ့အိမ် သို ့သွား ရောက် ခဲ့ ပါ သည် ။
ဒေါ် သိန်း အေး ၏ နာ မည် ကက် ကင်း ဖြစ် သော အုန်း သီး အ သား အား လက် ထဲ ကိုင် ဆောင် ထား ပြီး ၊ အုန်း သီး အ သား ဖတ် လေး အား စား ရင်း ၊ ဒေါ် သိန်း အေး အား အ ကြွေး ဆပ် ရန် ကိ စ္စ အား အ ဖေ ပြော ခဲ့ သည့် ၊ စ ကား ကြီး ဆယ် ခွန်း ထဲ မှ မိ မိ ဘက် မှ ပြော လို သည့် စ ကား အား ၊ ကောက် ပင် ရိတ် လှီး ဆို သ ကဲ့ သို့တ ခွန်း မျှ မ ကျန် မ ရှိ စေ ပဲ ၊ ပိုင် ပိုင် နိုင် နိုင် ပြော ဆို ခဲ့ ပါ လျှင်……
ဒေါ် သိန်း အေး မှ မ ရှိ ရှိ သည့် ပိုက် ဆံ လေး အား ၊ သူ့၏ အိမ် တွင် အိပ် သွန် ဖာ မှောက် ရှာ ကြံ ခါ ထုတ် ယူ လာ ပြီး ၊ အ ကြွေး အား ပြန် ဆပ် ပေး ခဲ့ ပါ တော့ သည် ။
ဒေါ် သိန်း အေး တ ယောက်……
အ ဖေ့ ထံ က အ ကြွေး ယူ စဉ် ၊ ပြုံး ပြုံး လေး နှင့် ပြော ဆို ပြီး ၊ ယူ ခဲ့ သည် ကို ကျ မ မှ အ မှတ် ရ နေ မိ ပါ သည် ။
အ ကြွေး သွား တောင်း သည့် အ ခါ တွင် ၊ အ ချိန် နှင့် အ ခြေ အ နေ အား တွက် ချက် ကြည့် ပြီး ၊ ယ တြာ လေး ဖြင့် တောင်း ယူ ခဲ့ မိ ခြင်း လည်း ဖြစ် ၍ ၊ အ ဖေ့ ထံ မှ ယူ ထား သော အ ကြွေး အား ၊ ဒေါ် သိန်း အေး မှ ပြန် ဆပ် ပေး လိုက် ၍ ၊ ကြွေး ယူ ပြုံး ပြုံး ၊ မ မုံး ရ အောင် တောင်း နိုင် ခဲ့ ခြင်း အ ပေါ် တွင်…..ပီ တိ ဖြစ် မိ သွား ခဲ့ ရ ပါ သည် ။
ကျ မ မှ အ ကြွေး ဆပ် လိုက် သော ပိုက် ဆံ လေး အား လက် ထဲ တွင် ကိုင် လျှက်…..
အိမ် သို ့စိတ် ချမ်း သာ ၊ ကျေ နပ် ပျော် ရွှင် စွာ ဖြင့် ပြန် လာ နိုင် ခဲ့ ရ ပါ သည် ။။
အန်တီအေးရေ ကတ်ကင်းလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသိတိုးရပါတယ်။ ကျုပ်လဲအကြောင်းရှိရင် အဲဒီနည်းကို မေးပါဦးမယ်။
အခုခေတ် စီးပွားရေးကတော့ အကြွေးပဲ
ရောင်းပြီးငွေချေ အဟောင်းပေးအသစ်ယူ နဲ့လည်ပတ်နေကြရတာကလား
မမအေးရေ …… ကြွေးယူတုန်းကတော့ ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ပြန်ပေးပါ့မယ် ဘယ်လိုဘာဖြစ်လို့လိုအပ်နေလို့ ပါ …… ငိုမတပ် ခြေသလုံးဖက်မတတ်ယူတတ်ကြပါလေရဲ့ ….. တကယ်ပြန်တောင်းတော့ ရန်စွာတာတောင်ခံလိုက်ရသေးတယ် …… ညီမပိုက်ဆံကိုချေးထားတာ ပထမတော့ ဖဲ့ဖဲ့ဆပ်နေတယ် ပါတယ် နောက်တော့ နည်းနည်းကျန်တာကို လုံးဝမပေးတော့ပဲ အတိုးရောအရင်းရောမလာပျောက်နေလေ ရဲ့ …… ကိုယ်ကသွားတောင်းတော့သူကမရှိ သူ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုပြောခဲ့ တယ် ပြောခဲ့ရမလားဆိုပီ ငွေချေးသူရဲ့အမေက ညီမအမေကိုလာတိုင်လေရဲ့ ……. ပူပူနွေးနွေးမနေ့ကမှ အဆူခံရတယ် အမေကပြောတယ် “သမီးက သူ့ညီမရှေ့မှာအကြွေးသွားတောင်းတယ်ဆိုတဲ့” သူကအတိုးမလာ အရင်းမဆပ်တာ ၃ လလောက်ရှိပီ သူများအကြွေးကျတော့မပေး ကိုယ်ကျတော့ ဟိုဟာဝယ် ဒီဟာဝယ်ဝတ် ဒါကို ညီမကိုလာကြွားသေးတယ် ……. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီနေ့မမအေးက ဒီပို့စ်ကို ဒီနေ့တင်တယ် ရင်ထဲခံစားချက်ကို ဖော်ပြခွင့်ရတာပေ့ါ ………..
အဆုံးရန်ကြွင်း၏ ဆိုတဲ့စကားက တကယ်မှန်တယ်နော်
ဒါဆို နောက်တစ်ခါအကြွေးတောင်းချင်ရင် ဓါတ်ကင် ဓါတ်ထောင်း
အဲလေ ဗေဒင်နတ်က္ခတ် လိုလားဟင်
သူများကို အကြွေးလည်း မပေးရဲဘူး ။
ကိုယ်လည်း အကြွေးမယူဘူးလို့ နေခဲ့ပေမယ့် .. သနားစိတ်နဲ့
အကြွေးပေးခဲ့ဖူးတယ် …. ။ ထင်တဲ့အတိုင်း ပြန်မဆပ်လို့ … တစ်ခါဆက်ဆံ ဆယ်ခါလန်တောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. ။
အခုလို သူ့နေ့နဲ့ သူ တွက်ချက်ပြီးမှ အကြွေးသွားတောင်းရတယ်ဆိုတာ .. တကယ်မသိဘူးပဲ …. ။
ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လုပ်ပြီး .. သွားတောင်းရင် တကယ်ရသလား … စမ်းလုပ်ချင်လိုက်တာ .
ဗဟုသုတရစရာလေးမို့ မှတ်သားသွားပါတယ် ရှင့်။
အနော်တို့ကတော့ မချေးဘူး …. ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် မျက်နှာငယ်ရတယ် ….
မှတ်သားသွားတယ် ဖတ်လည်းဖတ်သွားပါတယ် အကြွေးကယူလည်းမကောင်းဘူး ပေးလည်းမကောင်း ဘူးကင်းနိုင်သလောက်ကင်းအောင်နေနိုင်ကျပါစေ။။
“ကြွေးယူပြုံးပြုံးတောင်းလျှင်မုန်း မဆုံးသော်လည်းမိတ်ပျက်၏ ” ဆိုတဲ့စကားပုံလေးတော့ကြားဖူးပါတယ် ။ အကြွေးပေးလိုက်လို့လည်ပတ်ငွေများလာပြီး လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာပြီး ကိုယ်အတွက်ဖောက်သည်ကောင်းတွေတိုးတတ်သလို ရလာတဲ့ကြွေးကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ပဲ ချဲ ၂လုံးထိုးပြီး သုံးဖြုံးပြီး မွဲသွားကြလို့ ကြွေးဆုံးတတ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
ခုခေတ်ကြီးမှာ အော်နေကြတဲ့ ဆင်းရဲ မွဲတေမှု ပပျောက်ရေးဆိုတာကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တာ ကြွေးစနစ်ပဲ။
လုပ်ငန်းရှင်ကလည်း ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို မဆုံးဘူးဆိုရင် ကြွေးပေးဖို့ လက်မနှေးဘူး။
ဒါပေမယ့် ဆုံးမယ့်လူ၊ ကတိမတည်တဲ့လူ၊ ပြန်မရနိုင်မယ့်လူ တွေကိုတော့ တပြားဖိုးမှ ကြွေးပေးချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြွေးယူတဲ့လူအနေနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်မယ်။
ကုန်ကြွေးကို ကတိတည်အောင် ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် နောင်ရေရှည်မှာ အရင်းအနှီးမလိုပဲ (သို့) ကိုယ်တတ်နိုင်တာထက်ပိုတဲ့ ပမာဏနဲ့ ရင်းနှီးနိုင်လို့ အမြတ်အစွန်း ပိုမိုရနိုင်ပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ဖို့ မခဲယဉ်းပါဘူး။
အဓိက က တော့ ကြွေးယူပြီးရင် ပြန်ဆပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့၊ ဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။
ကြွေးတောင်းနည်းလေး သိရလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တစ်ချို ့များဗျာ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ပြန်ရန်တောင်ရှာတယ်ဗျာ။
အကြွေးမရောင်းနိုင်တဲ့သူ ငုတ်တုတ်မေ့ပဲ ၊ငွေရင်းနှီးတတ်နိုင်တဲ့လူ ကောင်းစားတဲ့ခေတ်(ကိုပေ)
ရန်ကုန်က ဆိုင်ကြီးတစ်ခုဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ပုံလေး၊ ဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်စုံစမ်းဆက်သွယ်ပြီး (တစ်ခါမှ မဆက်ဆံဖူး၊မသိဖူးပဲ) ငွေဆယ်သိန်းဖိုးလောက်အကြွေးချပေးတာကြုံဖူးတယ်၊ ငွေကိုနောက်မှ အေးဆေးလွှဲပါဆိုပဲ။ ကျဈေးဖြစ်နေတဲ့ရောင်းကုန်တွေကို ဈေးကွက်မြန်မြန်ပို့တဲ့စံနစ်လားမဆိုနိုင်၊
အော်… အကြွေး… အကြွေး…
ရရန်ပဲဖြစ်ဖြစ် … ပေးရန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ..
အကုသိုလ် အတုံးလိုက် အတစ်လိုုက် ဝင်လာသလိုမျိုး….။
အန်တီအေးရေ သမီးကတော့ အကြွေးကို မယူမိခဲ့သလို ပေးလည်း မပေးမိသေးဘူး။
ဒါပေမဲ့ အသက်တရာမနေရ အမှုတရာပွေရတဲ့ လောကကြီးမှာ ဘဝဆိုတာလည်း နိမ့်မြင့်တက်ကျရှိနေသေးတော့ တနေ့ မကြုံဖူးလို့တော့ မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့ အန်တီအေးရယ်။
လူပြိုတစ်ယောက်ကတော့ ဆိုင်မော သီချင်းကို ညည်းနေတယ်
မောင်ပေးတဲ့ အချစ် ပြန်ဆပ်ခဲ့ဘာ….တဲ့
သူငယ်ချင်း ၁ယောက်က ကျုပ်ဆီ ပိုက်ဆံလှမ်းချေးတာ မပေးလို့ (တကယ်လဲပေးစရာမရှိ) လမ်းတွေ့တောင်မခေါ်တော့ဘူးဗျာ…နောက်တော့ ပြန်ကြားလိုက်ရတာ ရင်နာလို့ သေတောင်အပေါင်းအသင်းမလုပ်တော့ဘူးပြောတယ်တဲ့ …ခက်ရောဘဲ
ငွေချေးလိုက်ပြန်ရင်ကော..ပြန်တောင်းတဲ့အခါ အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့လား …မထင် ရေးချ မထင်…
စီးပွားရေးလုပ်တာတော့ သဘောကောင်း အားနာနေလို့ အချိန်တိုင်းအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ အန်တီအေးပြောပြသွားတဲ့ ကြွေးတောင်းနည်းကတော့ ကြွေးပြန်မရမှာစိုးရိမ်တဲ့စိတ် ရန်တွေ့ခံရမှာစိုးတဲ့စိတ်တွေကို ပြေစေနိုင်မှာတော့အမှန်ဘဲ။ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး မရောထွေးစေဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်ကြရင် ကြီးပွားဖို့အခွင့်အလမ်းပိုများမယ်လို့ မြင်မိပါကြောင်း
ငြိမ်းတို့ ဆယ်တန်းတုန်းက ဆရာတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံလာချေးရင် သူမချေးဘူးတဲ့။ သူတတ်နိုင်သလောက်ပဲပေးလိုက်တယ်တဲ့လေ။ ပြန်ဆပ်ဆပ်၊ မဆပ်ဆပ် စိတ်ထဲမထားတော့ဘူးတဲ့။ လှူတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတယ်တဲ့လေ။ အကြွေးပေးပြီး လာပြန်ဆပ်မှာကိုမျှော်ရတာ စိတ်ဆင်းရဲဖို့အကောင်းဆုံးပဲမို့ လာချေးရင် မချေးဘဲနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်ကိုပဲ ပေးလိုက်တာ စိတ်ချမ်းသာတယ် ဆိုတဲ့ ဆရာ့စကားလေးကို ပြန်သတိရမိပါတယ် အန်တီအေးရေ…..။
အခုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရယုံပဲ၊စိတ်ထဲမထားပါနဲ ့လို ့ဘဲပြောလိုက်ပါရစေကွယ်။
သဂျီးကို ကက်ကင်းရိုက်ချင်လို့ ဘယ်နှယ်လုပ်ရဗာ့…။ သမီးဒေါ်ဂလေးနဲ့ စကားခွင့်ရတဲ့အခါ သူ့မျက်နှာဂျီး မြင်ဂျင်ဘူး..အဲဒါ ကူညီပါ အန်တီအေး…။
သူ ့မျက်နှာဂျီး မြင်ဂျင်ဘူး…လားကွယ်။
ပေးမရမယ်လဲဆိုရော များလိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက် အကြွေးသွားတောင်းတာမရဘဲ
အကြွေးတောင်းနည်းက သူ့နေ့နံနဲ့ လုပ်ရတာလား ။
အကြွေးတောင်းစရာတွေ ကြုံလာလျှင် ဘာလေးလုပ်ပြီး ဘယ်လိုတောင်းရလဲဆိုတာမျိုးနေ့နံ ့အလိုက်ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ။
အချိန်ရမှ အားမှပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။